Adda Bilisummaa Oromoo: Dhaamsa Waggaa Haaraa 2017 » op
December 29, 2016 7:22 pm by Admin
Dhaamsa Waggaa Haaraa 2017
Kabajamaa Ummata Oromoo, mirgi kee sarbamuu irraa alagaan roorrifamuu irraa jireenya hadhaawaa gaggeessuuf dirqamte;
Waraana Bilisummaa Oromoo diina kuffisaa kufaa jirtu;
Qeerroo Bilisummaa Oromoo, diina dhala namaaf naasuu hin qabne irratti finciluun mirga ummata keessaniif falmaa irratti argamtan;
ABO Baga waggaa haaraa 2017 geessan jechuun maqaa GS-ABO fi miseensota ABO maraan dhaamsa gammachuu isiniif dhiheessa. Waggaan haaraa kunis waggaa ummatni Oromoo harqoota gabrummaa jalaa bahee bilisummaa isaa itti gonfatu, bara diinni ummatootaa itti jilbeenfachiisamee kabajamuun mirgi ummatootaa itti mirkaneeffamu akka tahu hawwina.
Wayta wggaan haaraa seenu waggaa dabre keessa kan raawwatame, milkiilee argaman, gufuulee fi rakkoolee mudatan of booda deebi’uun kan ilaallu irra caalaa hojjatuuf ittiin of qopheessuufi. Bara 2016 keessa mooraan QBO maal akka fakkaatu, ummatni Oromoo haala akkamii keessa akka turee fi dabarse, haalli impaayera Itophiyaa fi diinaa maal akka fakkaata ture? gamaaggamatuun waggaa haaraa keessa kan hojjatamuu qabu irratti hammilee fi murannoon itti seenuutti dabalee gufuulee mul’atan jabinaan dura dhaabbatuu dhaan irra aanuuf gargaara.
Ummatni Oromoo jaarraa tokkoo fi walakkaa oliif harqoota gabrummaa irratti fe’ameen miidhaan dorgomaa hin qabnee fi hacuccaan dhala namaaf hin malle irra gahaaera. Waggoota dheeraa bittaaa alagaa jala ture kana keessattis mootummootnii jijjiiramanillee, akeekaa fi galiin isaanii jijjiiramuu dhabuu irraa hacuuccaa fi saaminsi babal’atuu fi jabeeffamuu malee isanii xiqqaatan hin mul’atne. Maqootnii sirnaa hawwatoo moggaafatanis summii dammaan makame, waaroo akeeka qaban ittiin golgatan tahuu irra dabree ummatoota fayyaduu hin dandeenye. Kan bara bittaa Wayyaanee/IHADG ammoo ittuu hammatee ummata Oromoo diinatti moggaasee duula bifa gara garaa irratti geggeessuu irratti argama. Kana irraas ummatni Oromoo haala kanaan dura mul’atee hin beekne keessatti akka jireenya gadadoo keessatti kufu taasifameera.
Har’a ilmaan Oromoo kuma kudhanoota danuun lakkaa’aman mana hidhaa Wayyaanee beekamuu fi hin beekamne keessatti gidirfamaa, tumamaa, miidhaan qaamaa fi samuu irraan geessifamaa jira. Lammiilee mirga ifii fi ummata isaaniif dubbatuu fi falmuu irraa diinni irratti roorrisaa jiru kanneeniif ABOn kabajaa qabaaf. Karaa isaaf danda’ame hundaan kan bira dhaabbatu tahuu hubachiisaa, ummatni keenya biyya keessaa fi hawaasni Oromoo ala jiru marti obboleeyyan isaa haqaaf dhaabbatuu irraa giddirfamaa jiran kanneeniif dirmatnaa barbaachisu akka godhu hiree kanaan yaadachiisa.